Fanisana Info. About. What's This?
Ny Fanisana dia faritry ny siansa teôrika vita aminny fizohinkevitra lôjika ambonny kaonsepta ohatranny isa, ny endrika, ny rafitra sy ny voatra. Ny fanisana midika koa ny faritra ny fitadiavana mahangeza ny fahaizana. Miavaka aminny siansa afa ny fanisana aminny fijereny manokana aminny zava-misy. Ara-tsaina be mihintsy ny fanisàna.
Ny Bokinny Nomery na Bokinny Fanisana na Bokinny Fivahiniana izay hafohezina aminny hoe Nomery na Fanisana na Fivahiniana dia boky fahefatra ao aminny Baiboly izay manohy ny tantara ao aminny Eksodosy momba ny fivezivezenny Israelita tao an-tany efitra notarihini Mosesy hatrany aminny lemaki Moaba, tsy lavitra ny tany Kanaana. Boky ao aminny Testamenta Taloha ny Nomery na Fanisana. Ny Bokin’ny Nomery ao amin’ny Baiboly jiosy dia isan’ny Torah, fa ao amin’ny Baiboly kristiana kosa dia isan’ny Pentateoka.
Ny Indianapolis dia renivohitra ny Indiana, any Etazonia Taminny fanisana taminny taona 2010, nisy olona 839 489 mahery tany, Indianapolis no tanàna lehibe indrindra any Indiana, aoriani ny Fort Wayne, Gary, Evansville, Hammond, Bloomington sy South Bend.
Ny Columbus dia renivohitra ny Ohio, any Etazonia Taminny fanisana taminny taona 2010, nisy olona 787 033 mahery tany, Columbus no tanàna lehibe indrindra any Ohio, aoriani ny Cleveland, Cincinnati, Toledo sy Akron.
Ny Honolulu dia renivohitra ny Hawaii, any Etazonia Taminny fanisana taminny taona 2010, nisy olona 374 658 mahery tany, Honolulu no tanàna lehibe indrindra any Hawaii, aoriani ny Pearl City, Hilo, Kailua, Waipahu, sy Kaneohe.
I Azerbaijana dia firenena ao Azia. Ny renivohiny dia Baku. Ny tanàna lehibe indrindra dia ny renivohiny. 86 600 ny velarantaniny ary 9.356.500 ny isa-mponiny araka ny fanisana natao tamini 2013.